မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် မူရင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှု ယန္တရားများ။
ဤအကျဉ်းချုပ်စာတမ်းသည် ရွှေ့ပြောင်း သွားလာခြင်းဆိုင်ရာ အချို့အကြောင်းအရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းပညာ အကြံပြုချက်များပေးရန်အတွက် အိုင်အယ်လ်အို ရန်ကုန်ရုံးမှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ (LIFT) ၏ ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုဖြင့် အတွဲလိုက်ရေးသားထုတ်ဝေသည့် အကျဉ်းချုပ် စာတမ်းများအနက် ပထမဆုံးဖြစ်သည် ။ ဤအကျဉ်းချုပ် စာတမ်းတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် တိုင်ကြားမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှုဆိုင်ရာ ယန္တရားများအား ကြပ်မတ်ထိန်းချုပ်သည့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဥပဒေမူဘောင်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည် ။ အစိုးရတိုင်ကြားမှုယန္တရား ၊ သံရုံးများ ၊ မြန်မာပြည်ပ အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့ချုပ် (MOEAF)၊ လူကုန် ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ ၊ အဓမ္မစေခိုင်းမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ အိုင်အယ်လ်အို၏ တိုင်ကြားမှု ယန္တရားနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် မတူညီသော ယန္တရားများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာထားသည် ။ အခြားမူရင်းနိုင်ငံများမှလေ့လာထားသော ကောင်းမွန်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဥပမာထား၍ ရေးသားပြုစုထားသည်။
Country of origin complaints mechanisms for overseas migrants from Myanmar
This Briefing Paper is the first inaseries of Briefing papers providing technical input on particular migration issues being produced by the ILO Yangon supported by Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT). The briefing paper provides the international legal framework and guidelines governing complaints or grievance mechanisms for migrants. It analyses different mechanisms currently available to Myanmar migrants including the government complaints mechanism, embassies, Myanmar Overseas Employment Agencies Federation (MOEAF), Anti-Trafficking in Persons Division, ILO Forced Labour complaints mechanism and civil society organisations and labour organisations support services. It provides examples of good practices from other countries of origin.
ကလေးအလုပ်သမားခိုင်းစေခြင်းအား အတူတကွ တိုက်ဖျက်ကြပါစို.။
ကလေးသူငယ် အလုပ်သမားဟူသည် ၄င်းတို့၏ ကလေးဘ၀၊ ၄င်းတို့၏ စွမ်းရည်နှင့် ၄င်းတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပိတ်ပင်သည့် အလုပ်ကို ရည်ညွှန်းပြီး ၄င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုတို့ကို ထိခိုက်နစ်နာစေပါသည်။ ယင်းသည် ကလေးသူငယ်များ၏ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ (သို့) ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် အလုပ်များကို ရည်ညွှန်းသည်။
The role of Trade Unions in the fight against child labour (Myanmar Version)
The role of Trade Unions in the fight against child labour
What is Child Labour? (Myanmar Version)